Gated सामग्री: तपाईंको B2B राम्रो BXNUMXB मा प्रवेशद्वार! | Martech Zone
Gated सामग्री एक रणनीति हो धेरै B2B कम्पनीहरु द्वारा राम्रो र अर्थपूर्ण सामग्री प्रदान गर्न को लागी विनिमय मा केहि राम्रो नेतृत्व प्राप्त गर्न। Gated सामग्री सीधा पहुँच गर्न सकिदैन र केहि महत्वपूर्ण जानकारी साटासाट पछि यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ।
B80B मार्केटि assets सम्पत्तिहरूको %०% gated; gated सामग्री B2B नेतृत्व उत्पादन कम्पनियों को लागी रणनीतिक छ।
गेट गरिएको सामग्रीको महत्त्व जान्नु महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं B2B उद्यम हुनुहुन्छ र यस्तै उच्च स्तरको सम्पत्ति निश्चित रूपमा उल्लेख मात्र गर्न योग्यको छ। यसैले यस मूल्यवान सम्पत्तिमा समर्पित एउटा लेख छ जुनको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने क्षमता छ नेतृत्व पुस्ता B2B कम्पनीहरूका लागि।
कुनै पनि इनबाउन्ड अभ्यासको लागि गेट गरिएको सामग्री नि: शुल्क छ; यो केवल जानकारीको आदानप्रदानको बिरूद्ध उपलब्ध छ। सामग्री लुकाउनको लागि धेरै कारण लिडहरू उत्पन्न गर्नु हो। जब एक प्रयोगकर्ता एक वेबसाइट मा आउँछ र एक सम्पत्ति डाउनलोड गर्न लाग्दछ; यसले आगन्तुकलाई फारम भर्न अनुरोध गर्दछ। यो फारम महत्वपूर्ण जानकारी मार्केटिंगको लागि नेतृत्व लिनको लागि हो। एक जेथा एक सम्पत्ति डाउनलोड गर्न को लागी उत्सुक छ शायद राम्रो नेतृत्व हुन सक्छ।
त्यसैले यहाँ gated सामग्री को विशिष्ट लाभहरु छन्:
राम्रो नेतृत्व कब्जा को आफ्नो संभावनाहरु लाई बढाउँदछ
लीडहरू मार्फत उत्पन्न बिक्री बढाउँदछ
हामी तपाईंलाई ग्राहकको बारेमा राम्ररी अन्तर्दृष्टिहरू हुने मौका दिई आफ्नो ग्राहकलाई राम्ररी चिन्छौं
Gated सामग्री तपाइँको ग्राहकहरु चिन्न वा तपाइँको आगन्तुकहरु को बारे मा अधिक जान्न को लागी एक राम्रो पकड र अधिक नियन्त्रण दिन चाहान्छ। Gated सामग्री पनि यसको एक नकारात्मक पक्ष छ जस्तै कम SEO फाइदाहरू राख्नु, तपाईंको सम्भावनालाई तपाईंको वेबसाइटबाट टाढा राख्ने सम्भावना, तपाईंको प्रयोगकर्ताको लागि कुनै स्पष्ट ब्रान्ड दृश्यता जसले अन्यथा तपाईं को हो भनेर बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ, वा कम पृष्ठ दृश्य भएको वा यातायात मा पनि कमी
गेट गरिएको सामग्री होशियारीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ जब तपाईंसँग स्थानमा अन्य रणनीतिहरू छन् र तपाईंले अझै पनि केही आगन्तुकहरू गुमाउने जोखिम लिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो राम्रो नेतृत्व लिन फाइदाजनक हुन सक्छ, किनकि जसले ब्रान्डको बारे जान्न इच्छा गर्दछ वा सामग्रीको आवश्यक छ, र केही सेवाहरू पनि आवश्यक छ कि हुनसक्छ तपाइँसँग जानकारी साटासाट गर्दछ।
त्यसोभए gated सामग्रीका उदाहरणहरू के के छन् जुन तपाईं सम्भवतः आफ्नो वेबसाइटमा केहि राम्रो नेतृत्व प्राप्त गर्ने आशामा लगाउन सक्नुहुन्छ?
यहाँ gated सामग्री को केहि उत्तम रूपहरु मा एक द्रुत झलक छ:
ई-पुस्तकहरु - आगन्तुकहरु बीच एकदम लोकप्रिय; एक e-book एक गाईड हो जुन तपाइँलाई कुनै विशेष विषय विशेषज्ञतामा केहि प्रामाणिक जानकारी दिन सक्छ। यो छोटो गाईडको रूपमा हुन सक्छ जुन ब्रान्ड जागरूकता र ब्रान्ड अधिकार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ; यो एक मजबूत दावेदार बनाउने gated सामग्री को सबै भन्दा राम्रो रूप को एक हुन।
Whitepapers - गेट गरिएको सामग्रीको अर्को लोकप्रिय रूप- ह्वाइटपेपरहरू गेट गरिएको सामग्रीको उत्कृष्ट रूप हो। यो आफैंमा एक विषयवस्तु विशेषज्ञता हो र यसले लिखित कुनै पनि विषयको बारेमा सबैभन्दा प्रामाणिक जानकारी दिन सक्छ। ह्वाइटपेपरहरू लोकप्रिय छन् किनभने तिनीहरू उत्कृष्ट सामग्रीका अत्यधिक विश्वसनीय स्रोतहरू हुन् र तपाईंलाई एक सोच्ने नेताको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। Gated सामग्री राम्रो नेतृत्व को एक महान स्रोत हुन सक्छ किनकि यसले तपाईलाई विश्वास गर्न को लागी अधिक व्यक्ति प्राप्त गर्न सक्छ र तपाईको ह्वाइटपेपर जानकारी डाउनलोड गर्न चाहन्छ।
webinar - एक वेबिनार राम्रो gated सामग्री को अर्को उदाहरण हो। यो तपाइँसँग सहभागी हुन र अन्तर्क्रिया गर्न इच्छुक आगन्तुकहरूको लागि एक उत्कृष्ट टेक-टाई हो। यी प्रकारका गतिविधिहरूले विश्वास र दीर्घकालीन सम्बन्धहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं यी लिडहरूको पोषण पनि गर्न सक्नुहुनेछ जो इच्छुक छन् वा जो वेबिनारका लागि दर्ता छन्। यो gated सामग्री को एक रूप हो कि राम्रो नेतृत्व पनि आकर्षित गर्न सक्छ।
सामग्री प्रस्तावहरू खरीददारहरूको यात्राभरि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यो सम्भावित निर्माण र सीसा पालनपोषण प्रक्रियाको लागि तपाईंको संभावनाहरूको लागि उपलब्ध गराइएको केहि राम्रो गेट गरिएको सामग्री हुनु महत्वपूर्ण छ।
टैग: b2b मार्केटिंगई-पुस्तकहरुgated सामग्रीनेतृत्व पुस्तादर्ताwebinarswhitepapers